मिल्लान त ओली–नेपाल ?
3rd November, 2020 Tue ०७:४७:४३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । गुमनाम रहेका नेता प्रदीप नेपाललाई भेट्न गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरू घरमै पुगे । तस्बिरै खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाले । पार्टी फुट्लाझैं गरी दुई अध्यक्षको सम्बन्ध बिग्रिएका बेला भएको उक्त भेटलाई लिएर धेरैखाले अड्कलबाजी भए ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - कतिले अनुमान लगाए– अब नेकपा विभाजन हुँदैछ, उनलाई फेरि सक्रिय हुन आग्रह भयो । कतिपयले त पूर्व एमाले ब्युँताएर प्रदीप नेपाललाई अध्यक्ष नै बनाउन लागेको भनिदिए । तर, नेपालले भने, ‘पार्टी एकता बचाउन तपाईंले माधव कमरेडलाई सम्झाई दिनुपर्‍यो भन्ने उहाँहरू (ओली निकट नेताहरू) को आग्रह थियो ।’
नभन्दै सोमबार वरिष्ठ नेता माधव नेपाल उनलाई भेट्न गोठाटार पुगे । त्यहाँ उनीहरूबीच करिब दुई घण्टा बातचित भयो । ‘उहाँ (माधव नेपाल) ले हिजो (आइतबार) टेलिफोन गर्नु भएको थियो । तपाईंकहाँ प्रधानमन्त्रीका मान्छे आएछन्, मैले पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाएँ । म भोलि लप्सीफेदीको कार्यक्रममा जानुछ । फर्किंदा तपाईंकहाँ पस्छु भन्नु भएको थियो,’ प्रदीपले भने, ‘त्यसपछि उहाँ आउनु भयो । कुरा खस्रा–मिठा भन्छन् नि ! त्यही भयो ।’
पार्टीभित्र दुई अध्यक्षको पेचिलो अन्तर संघर्ष चुलिइरहेका बेला नेताहरू शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाल, सूर्य थापा, राजन भट्टराईलगायत उनलाई भेट्न शनिबार गएका थिए । भेटपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले धेरैपछिको सामूहिक भेटमा रमाइलो र दुर्लभ कुराकानी पनि हुने नै भयो भन्दै तस्बिर समेत सार्वजनिक गरे ।
उनीहरू के गर्न आए ? भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले प्रदीपसँग जिज्ञासा राखेको उनले सुनाए । ‘तपाईंहरू (ओली–नेपाल) मिल्नु पर्‍यो रे ! मलाई पनि सक्रिय भई दिनुपर्‍यो, तपाईं हामी सबैको अभिभावक हुनुहुन्छ भन्दै आउनु भएको थियो’, प्रदीपले माधवलाई जवाफ दिए ।
‘माधव कमरेड यहाँ आइरहनु हुन्छ । त्यही क्रममा आउनु भयो । म एकदम सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर छु । अब थाकें । कति गर्न सक्छु र ?’ नेता नेपालसँग भएको कुराकानी बताउँदै उनले भने, ‘तपाईंहरू मिल्नु हुन्छ भने मिल्छ, मिल्नै चाहनु भएन भने मिल्दैन ।’